Mashiinka Siomay, Mashiinka Aaminaada otomatiga ah - Fuxin
Waxaa naga go'an in la abuuro ganacsi mashiinada cuntada la brand caan ah. Waxaan la dadaalaya xagga goolka iyo sii hagaajin doonaa mashiinada tayada inuu ku guuleysto qanacsanaanta iyo kalsooni macaamiisha ee. Waxaan rajeynaynaa in aan iskaashi la macaamiisha iyo saaxiibada our gudaha iyo dibaddaba. Waxaan si adag u aaminsan yihiin in ay u dooran na waa in ay doortaan oo tayo leh.
FX-800D otomatiga hal khad siomay / siomai / shu ...
Khadka Tooska ah ee Siomay / Siomai / Shumai Maki ...
Sadarka Tooska ah ee Siomay / Siomai / Shumai Maki ...
Automatic Machine Making dumpling
Ningbo Jiangbei Fuxin Qalabka Warshada Cuntada, Co., Ltd.
Waxaan nahay soo saare xirfadle oo mideeya R&D, waxsoosaarka, iibinta iyo adeegga iibka kadib.
Shirkadeena waxay leedahay qalab badan oo warshadeyn ballaaran.
Tan iyo markii la aasaasay shirkadda, alaabada waxaa lagu iibiyay waddanka oo dhan waana loo dhoofiyey dibedda, waxaana oggolaaday oo ay ammaaneen macaamiisha. Waxaan had iyo jeer aaminsanahay in “Tayada ay aasaaska u tahay horumarka ganacsiga, iyo aaminaaduna ay tahay xoogga u horseeda horumarka shirkada” Haddii aad xiisaynayso, si daacad ah u soo dhowow weydiimahaaga.
Ningbo Jiangbei Fuxin Cuntada Makiinado Co., Ltd
Cinwaanka: Tuulada Xiashan, wadada hongtang, degmada jiangbei, magaalada ningbo, gobolka zhejiang (soonaha A)
© Copyright - 2010-2019: Dhamaan Reserved Rights. Products Featured - Sitemap - Site Mobile
cufan caadka bolle Machine , caadka cufan bolle Machine Samaynta , Automatic caadka cufan bolle Machine , Pan-shiilay caadka cufan bolle Machine , caadka cufan bolle Machine , guriga caadka cufan bolle Machine , All Products